३ दिन अघि देखि छोराको ‘बर्थ डे’ मनाउन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीका बुबा बालुवाटारमै अलपत्र ! प्रधानमन्त्री पत्नीलाई सुरक्षा सहित केक काट्ने ठाउँमा लगिदै गर्दा त्यहि रहेका बुबालाई कसैले वास्ता गरेनन ! (भिडियो रिपोर्ट) – Etajakhabar
३ दिन अघि देखि छोराको ‘बर्थ डे’ मनाउन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीका बुबा बालुवाटारमै अलपत्र ! प्रधानमन्त्री पत्नीलाई सुरक्षा सहित केक काट्ने ठाउँमा लगिदै गर्दा त्यहि रहेका बुबालाई कसैले वास्ता गरेनन ! (भिडियो रिपोर्ट)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण ११, २०७४ समय: १८:४१:३२